10 Kasị adọrọ mmasị Train Stations Na Spain | Save A Train
Home > Ingbọ ologo Spain > 10 Kasị adọrọ mmasị Train Stations Na Spain
E nwere ọtụtụ nke na-akpali na-arụsi ọrụ n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè na Spain. Ị ga-ahụ oke ọsọ, usoro anya, mpaghara, mepere na hotel-ụgbọ okporo njem na mba. Si nnukwu oge a ụgbọ ka nta ndị gbara ya gburugburu agwa, ndị a bụ 10 nke Spain kasị adọrọ adọrọ Train Stations.
Stationlọ ọgbara ọhụrụ bụ otu ọdụ ụgbọ oloko kachasị dị egwu na Barcelona. Ọ bụ isi n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè ma mba na mba njikọ ụgbọ oloko. Nke a ojii bụ pụtara nnukwu na odude n'ime obodo center. Ọ na-eji ma obodo na njem nleta na ga jikọọ gị na ọtụtụ n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè gafee Spain.
Nke a ojii bụ nnukwu na Madrid na kemgbe gburugburu ruo ọtụtụ afọ. Ọ bụ a mara mma ebe and one of the most Fascinating Train Stations, na ụlọ a mara mma ebe okpomọkụ ubi na mbe ebe nsọ n'ime. on March 11, 2004, a ụbọchị a maara ugbu a na Spain dị ka 11-M, 191 ndị gburu na usoro nke bombings. Ha mere na anọ COMMUTER ụgbọ oloko ma na a ojii na nso.
Santa Justa bụ nke atọ-kpa ebe ke Spain, na a ngụkọta nke iri na abụọ nyiwe. Ọ na-aha ya bụ mgbe otu n'ime Seville si mmasị nsọ (nwanne Santa Rufina). The ụlọ a na-emi odude ke Eastern akụkụ nke Seville obodo center. The dị ọcha Mee na imewe bụ ihe atụ nke na obodo modernization atụmatụ 1991.
Ronda kwuru na-abụ otu n'ime ihe ndị kasị mma obodo na Spain. Nke a Spanish oke nke-adọrọ adọrọ Train Stations bụ indicative nke a, na-a ga-ahụ. The ebe e wuru azụ na 1892, Otú ọ dị, ọ e emelitere na ebube nọgidere na-enwe ihe karịrị afọ. The ojii ka nwere "Anglo" ma ọ bụ colonial Indian anya doo. The osisi-yọrị kanopi na-akwado na ígwè ogidi onwere n'akụkụ ikpo okwu.
Nke a ojii na-emi odude ke mma ochie obodo nke Zamora. Ọ bụ otu n'ime ndị kasị ama n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè na Spain n'ihi na ya mara mma nke bụ n'ihi na mpaghara na omenala ije, na wepụrụ ebubo rooves, ashlar nkume na a nnukwu Central njiko onyeisi oche. Nke a ojii bụkwa ama maka mkpa o nwere na Ruta de la Plata dị ka a na njikọ ntụpọ.
Nke a ojii na-emi odude ke obio Zamora na Castile na Leon na-atụle ga-otu n'ime ndị kasị adọrọ adọrọ Train Stations ebi mere. Ya na-ewu nwere na-kwụsịrị na 1929 na e mechara na 1958. Ọ nwere a-adọrọ Renaissance n'ike mmụọ nsọ na ụfọdụ nkọwa ndị na-a na-echetara nke a mbubreyo Gothic style. Ọ bụ n'ezie ume-inweta.
Nke a ụgbọ okporo ígwè pụrụ ịchọta obodo nke San Sebastian, a mara mma ebe àjà ma ịrịba osimiri na ugwu echiche. Nke a ojii bụ mma n'onwe ya dị ka kanopi ekpuchi nyiwe e mere site Gustave Eiffel bụ onye otu onye ndị a haziri nke eiffel tower na France.
Nke a hapụrụ ghota nke-adọrọ adọrọ Train Stations nwere ike ịchọta na ókè-ala n'etiti Spain na France. Ọ e mepere 1928 na kpọrọ ndị "Titanic nke Mountains."Ọ na-e wuru mbo mbuli ahia n'etiti mba abụọ ma mgbe e nọgidere na-enwe ma e hapụrụ ebe 1970. The ojii na-atapụsị iberibe taa. Njem nleta na-ka na-enwe ike ịhụ a oyiyi nke otú akwa ya dị ụbọchị. More Spanish njem nleta agawo saịtị kemgbe 2013. More karịa ọnụ ọgụgụ nke ndị na-ebi gara ebe mgbe ọ bụ na-emeghe.
Nke a bụ isi ụgbọ okporo ígwè na obodo nke Valencia. Ọ e wuru na 1917 na ghọrọ a nnọchianya nke European modernist ije. Ọ bụ a nnukwu ụlọ na a nnukwu elekere na ugo ọkpụkpụ na etiti, nke ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị nnọchiteanya ọcha nke ebe taa. Nke a ghota nke-adọrọ adọrọ Train Stations na-atụle a ụlọ nke Cultural Interest.
Nke a ojii dị na elu nke Algeciras na a ole na ole kilomita si n'ọdụ ụgbọ mmiri ruru ka a akụkọ ihe mere eme chọrọ na pụtara ya nwere ịbụ na ha nso nke Gibraltar 100-ton egbe ala. This train is used by people who would like to visit the Rock nke Gibraltar. Ya na nke mbụ mepere 1982 na ka nwere ihe agadi-akwụkwọ anya ma na-eche na ya.
Ezie na e nwere na-a ọnụ ọgụgụ nke ha na-arụ ọrụ na Spain taa, ndị a bụ 10 nke Spain kasị adọrọ mmasị n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè ileta. Train njem bụ nnukwu akụkụ nke ọha iga usoro na mba na-agba were were gafee osisi. E nwere ọnụ ọgụgụ nke mara mma ụbọchị njem yana n'elu-n'abalị ahụmahụ ka nwere ụgbọ okporo ígwè na ọ bụ uru gị mgbe ka ojiji nke ụzọ ụgbọ okporo ígwè mgbe ị gara na Spain.
Chọta ndị kasị mma na ndị dị ọnụ ala tiketi na Europe Save A Train, Ọ na-ewe 3 minutes now to book a train ticket on Zọpụta a Train. kasị adọrọ adọrọ Train Stations na Spain, Lezienụ iji niile na-ewu ewu ịkwụ ụgwọ ụzọ tinyere, kaadị na Paypal.
Ị chọrọ Embed anyị blog post gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F10-fascinating-train-stations-spain%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro
europeantravel ụgbọ oloko TrainStation Travel Njem